जगत ओलीले मन्त्री आलेबाट ५० लाख नपाएपछि… – Nepal Online Khabar
फागुण ४, २०७८ बुधबार 108
काठमाडौं : अहिले भाइरल बनेको भिडियो छ, बहालवाला पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले बोलेको अपशब्द । अछाम घर भई भारतको मुम्बइमा रहेका जगत ओली नामका युवकसँग
कुराकानीको क्रममा मन्त्री आले तथानाम गाली गर्छन् ।
त्यत्तिमात्र होइन ठाउँको ठाउँ त्यहीँबाटै उठाउनेसम्म मन्त्री आलेले ध’म्की दिन्छन् । सार्वजनिक भएको २ मिनेट २५ सेकेन्डको भिडियोमा मन्त्री आले युवकलाई गा’ली गलौ’ज र ध’म्की दिएको सुनिन्छ ।
त्यसपछि मन्त्री आले एक्कासी आ’क्रोशमा आउँछन् र युवकलाई गा’लीग’लौँज गर्छन् । ‘कुन ठाउँमा छ’स् भन त ?’ भन्दै मन्त्री जँगिदा युवक भन्छन्, ‘आउन त आउ म मुम्बइ छु ।’ मन्त्री आले गा’लीगलौँ’ज गर्न छाड्दैनन् र धा’राप्रवाह गा’लीगलौँ’जमा उत्रिन्छन् ।
भिडियो हेर्दा स्वभाविक रुपमा मन्त्री आलेको ग’ल्ती देखिन्छ किनकि राज्यको उच्च ओ’होदामा बसेर यसरी गा’ली गर्न सुहाउने कुरा होइन । जे घट’ना वा विषय हो त्यसमा संयमता अपनाएर प्रश्न गर्ने ठाउँमा उनी कुनै गु’ण्डा नाइकेसरी उत्रिएका छन् ।
यो त भयो मन्त्री आलेको दु’र्बल पाटो । अब लागौँ फेसबुकमा भिडियो अपलोड गरेर भाइरल भएका युवक जगत ओलीतिर । उनको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक च’हार्दा उनी विगतदेखि विभिन्न मन्त्री, नेताहरुवि’रूद्द आ’क्रमक रुपमा उत्रेर अने’कथरी लेख्ने गर्दै आएका छन् ।
युवकको फेसबुक राम्रोसँग चि’याउँदा उनी नेकपा एमालेनिकट भन्ने प्रष्टै बुझिन्छ । एमालेलाई गाली गरेको पटक्कै सुन्न नसक्ने र विरोधमा उत्रिइहाल्ने उनको फेसबुक हेर्दा सजिलै थाहा पाइन्छ । यसरी उनको फेसबुके क्रियाकलाप हेर्दा नियतबश नै मन्त्री आलेलाई पनि खुइल्याउन उनले हर्कत गरेका हुन् भन्ने प्रष्टिन्छ ।
मन्त्री आले र युवकको उक्त भिडियोसँगै थप सामग्रीहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् । युवकले मन्त्री आलेसँग एक वर्षसम्म ५० लाख कुरेको तर, रकम उपलब्ध नभएपछि समाचार अ’पलोड गर्न बाध्य भएको भनेका छन् ।
सार्वजनि भएको म्यासेजको स्क्रिनसट हेर्दा युवकले आफू जगत ओली भएको बताउँदै २४ घन्टाभित्र ५० लाख रकम माग आफ्नो बैंक खातामा पठाउन अल्टि’मेटम दिएका छन् ।
युवकले भनेका छन्, ‘इफ यु अक्सेप्ट माई डिमान्ड वी डिलिट योर भ्वाइस विदिन ट्वेन्टी’फोर आवर्स,सेन्ड फि’प्टी लाख । आई एम जगत ओली एन्ड रिप्लाइ मि सुन ।’
तर, मन्त्री आलेबाट कुनै जवाफ नआएपछि ५० को सट्टा २० लाख नगद मागेका छन् । युवकले लेखेका छन्, ‘सेन्ड मि २० लाख सुन यु सो से’ल्फिस एण्ड रिप्लाइ मि ।’
यी सबै हेर्दा, भारतमा बसेर मन्त्री आलेसँग ब्ल्याक’मेलिङ गरेर नसकेपछि युवकले अन्तमा उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अपलोड गरेको देखिन्छ ।
मन्त्री आलेसँगै युवकको पनि असली रुपमा मिडियामा आएपछि युवकले मिडिया र मन्त्री आलेवि’रुद्ध मानहानीको मु’द्धा लगाउने चुनौ’ती दिएका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘यस्लाइ प्रमाणित गर्न चुनौती दिन्छु यदि भएन भने प्रेम आलेलाई मानहानीको मु’द्दा लगाउने छु प्रमाणित भए जुनसुकै स’जाय भोग्न तयार छु ।’
यस विषयमा जगत ओलीलाई न्यूज २४ ले सम्पर्क गर्दा उनले बाहिर सार्वजनिक भएका म्यासेजका स्क्रिन सटहरु आफ्नो नभएको दावी गरेका छन् । तर, मन्त्री आलेको सचिवालयले भने सार्वजनिक भएका म्यासेजका स्क्रिन सटहरु ओलीकै भएको दावी गरेको छ ।
Prev‘एमसीसी’ अगाडि बढाए सरकार छोड्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय, वालुवाटारतिर प्रचण्ड !
Next५० पटक अन्तर्वार्तामा फेल, तर गुगलले दियो डेढ करोडको जागिर !
एमबाप्पे रियल म्याड्रिड जाने !